Inkwenkwezi ye-AHS iTaissa Farmiga iya kudlala inkwenkwezi 'ngokudibanisa' ukujikeleza 'iNun' kwiNdima yesihloko
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	I-AHS Star iTaissa Farmiga iya kudlala inkwenkwezi 'ngokudibanisa' ukujikeleza 'i-Nun' kwiNdima yesihloko
I-AHS Star iTaissa Farmiga iya kudlala inkwenkwezi 'ngokudibanisa' ukujikeleza 'i-Nun' kwiNdima yesihloko
by admin Aprili 24, 2017
by admin Aprili 24, 2017 2,047 imbono
Ibhalwe nguPatti Pauley
Iindaba ezinkulu ezothusayo eHollywood ngale ntsasa njengoko iNew Line ikubhengezile oko Ibali laseMerika elibuhlungu kwaye Amantombazana okugqibela Inkwenkwezi uTaissa Farmiga imiselwe ukubonisa unongendi omncinci kulindeleke kakhulu Ukugweba jikelezela ngaphandle, Nun. Iindaba ezixelwe ngokukodwa ngu Umhla wokugqibela, kuza njengothusayo kule Mvulo-ye-Mvulo, njengoko ndiqinisekile ukuba isihogo khange siyibone le izayo. Nangona kunjalo, iyavakala njengoko iiFamaigas 'zingabaziyo Okudibanayo iphela.
Ingxelo imuncu njengoko udadewabo kaTaissa omdala, uVera Farmiga eneenkwenkwezi kubo bobabini uJames Wan Ukugweba Iifilimu njenge-psychic uLorraine Warren ecaleni kukaPatrick Wilson njengo-Ed Warren. Umvelisi wesoyikiso esizayo uJames Wan ngokwakhe, uvakalise ukonwaba kwakhe kukuba uTaissa ajoyine isamente nge-Twitter:
Wamkelekile @iqosweb kusapho! Injongo kukusebenza nazo zonke iiFamaigas. @VeraFarmiga #Imvulo #ukulele https://t.co/ZlWAKbKq47
-UJames Wan (@creepypuppet) Aprili 24, 2017
Ifilimu ekhokelwe nguCorin Hardy (IHallow) kwaye ibhalwe ngu Annabelle kwaye UStephen King we-IT Umbhali uGary Dauberman kunye noJames Wan ohleli nakwisihlalo somvelisi kunye noPeter Safran, ngumlingisi wesibini ovela kwiimovie zeConjuring ukuze azenzele uhlahlo-lwabiwo mali olukhulu. Kwaye akukho nzima kangako ukubona ukuba kutheni. I-Nun eyaqala ukubonakala kwi-Conjuring 2 yayiyi-100% eyona nto yoyikekayo malunga naloo bhanyabhanya. Nangona ukubonakala kwayo kwakumfutshane, kwakwanele ukuhlala kude neecawa zamaKhatholika kuyo yonke indawo, kwaye unike kuphela abo bafunda kwezo zikolo zingqongqo zobu nun, amaphupha amabi iiveki ukuphela.
Ucinga ntoni ngoTaissa Farmiga ethatha le ndima yanamhlanje yoyikisayo? Isandi esingezantsi, kwaye ume ngaphezulu Nun iindaba ziyavela!
Ikhredithi yefoto ebonisiweyo: ComingSoon.net